Kenya - BBC News Somali
Wargeysyada Kenya waxay sheegayaan in Abiy Axmed uu qabanqaabinayo shir la isgu keenayo madaxweyne Maxamad Cabdullahi Farmajo iyo dhiggiisa Kenya, Uhuru Kenyatta.
Waaliddiinta aan ilmahooda u sheegin inuu hayo cudurka HIV ee geeriyooda waxay saameyn aad u weyn ay ku leedataa carruurta ay ifka kaga tagaan.
Balse waxa ay sheegtay hadal u muuqda in Kenya ay filayso in Somaliland ay noqon doonto dal madax banaan, waxayna tiri
Xoghayaha joogtada ah ayaa sheegay in hawsha dowladda la qaban doono bisha Agoosto ee soo socota.
Mareykanka waxaa uu ka hadlay muranka badda Kenya iyo Soomaaliya.
Dhageysiga kiiska ka dib, ICJ waxay soo saaridoontaa go'aanka kama dambeysta ah oo xilliga lagu dhawaaqayo la shaacin doono.
Maxaa kala haysta qaxootiga Dhadhaab iyo dadka deegaanka?
Waxa maanta guud ahaan caalamka laga xusaayaa maalinta qaxootiga aduunka oo sanad kasta la xuso 20 bisha June.
Xaqiiqo Baarista BBC-da : Maxaa ka jira in durba la been abuuray lacagta cusub ee Kenya?
Lacag cusub ayay Kenya soo saartay si looga hortago musuqmaasuqa, balse ma lacag been-abuur ah ayaa suuqa ku jirta?
Xilli uu weli taagan yahay muranka badda ee u dhexeeyo Soomaaliya iyo Kenya, waxay u muuqataa inay Kenya ay waddo dhaqdhaqaaq ku aadan arrintaas.
"Kenya waa inaysan Colleysanin Soomaaliya"
Todoba askari ayaa ku dhintay miino la kacday baabuur uu leeyahay booliksa Kenya oo marayey wadada isku xidha tuulooyinka Konton iyo Khorof Xaraar oo 20 km u jirta xadka Kenya iyo Soomaaliya, kana tirsan degmada Wajeer ee Kenya.
15 Juunyo 2019
Qaar ka mid ah culimada Muslimiinta ee Kenya ayaa sheegay in ay "aad u qoonsadeen tallaabada Kenya ay ku suuq-gelineyso khatka iyo ganacsigiisa."
Sawirro: Fagaareyaasha Kenya ee loo tago daawashada hardanka lo'da
Taageerayaasha ayaa sheegay in tartankaan lagu qabtay Kenya uu ka casrisanyahay midka lagu qabto Spain
Al-Shabaab ayaa horay u sheegatay weerarro ka dhacay Kenya
Khilaafka salka ku haya xadka badda ayaa soo jiitamayay ku dhawaad 10 sano